Literacy rates are dropping - displacing Zimbabwe from its position as the country with the highest literacy rate in Africa.
Survey show ZimbabweÃ¢â‚¬â„¢s literacy rate is dropping.
A recent survey was done by Professor Geoff Wells from Ukraine along with Friends for Zimbabwe. “The best guesses are that Zimbabwe’s current literacy rate is now in the low-80s and is dropping,” saidAndy Kozlov a Communication Research Consultant from Ukraine. “We roughly estimate that the literacy rate for those over 15 is dropping a half percent each year and that will accelerate to 1% each year as those who left school after 2005 reach age 15.”
“If current conditions continue, Zimbabwe will have a literacy rate of 70% in 2020.At this stage, it seems unlikely that Zimbabwe still has the highest literacy rate in Africa, with the more reliable estimates from Botswana (85%) and Tunisia (87%) probably surpassing it,” said Kozlov.